12 Uninzi lweeKedhedrali ezinomdla eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 12 Uninzi lweeKedhedrali ezinomdla eYurophu
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Train Travel Czech Republic, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Uloliwe kuhambo Italy, Ukuhamba ngololiwe eRashiya, Uloliwe eSpain, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe
Iingelosi, intsha, iiglasi-zipeyintwe ngombala oqaqambileyo iifestile, Zimbalwa zezinto ezikwi- 12 iicawa ezinkulu ezinomdla eYurophu. Yonke ikhedrale iphakamileyo, inkulu, kwaye kunomdla ngakumbi kunenye, nganye inezinto zenye.
1. Icawa yaseDuomo, milan
IMilan itsala izigidi zabakhenkethi minyaka le. Icawa yaseMilan, Icawa yaseMilan luphawu olunye oluza kukumangalisa ukusuka nje kuqala. Ithathe 600 iminyaka yokwakha icawa enkulu e-Itali, ezintle, ubabalo, kwaye iyamangalisa kwimarble epinki ekhanyayo.
Iifestile zeglasi ezigciniweyo, izinto zegothic, kunye nemifanekiso eqingqiweyo yegolide yaseMadonnina ephezulu zizinto ezimbalwa eziza kukuthakazelisa. ke, ukuba unqwenela ngokwenene ukuncoma i-cathedral yaseMilan, emva koko unokuhamba phezu kophahla. ke, Icawa yaseMilan yicawa kuphela kwihlabathi liphela, apho unokuhamba phezu kophahla.
Icawa kuphela yenkonzo enkulu eqhubeka okoko 1882, Icawa enkulu yaseGaudi yaseSagrada Familia, ngumsebenzi wobugcisa. Itempile yaseSagrada ngumxube weSpanish Late Gothic, Ubugcisa obutsha, kunye nolwakhiwo lweCatalan Modernism. Uyilo lukaGaudi lwalungu 18 izigcawu, ukumela 12 abapostile, Intombikazi enguMariya, abavangeli abane, kunye noYesu Kristu omde.
Ukwengeza, nganye yezi zinto zintathu zinokubonakala ngaphandle ngokungafaniyo: I-facade ye-Passion, Uzuko, Ubuso obungaphambili. ke, kuninzi ukubona kunye nokufumanisa, cwangcisa uhambo lwakho oluya e-Barcelona kakuhle, ukuze ungaphoswa yile cathedral imangalisayo.
3. Uninzi lweeKedhedrali ezinomdla eYurophu: Icawa yaseKolner, Cologne
Yakhelwe ngaphezulu 7 iinkulungwane, Cologne Cathedral luphawu obumangalisayo loyilo lwamaGoth. Ngaphezu, ICologne Cathedral sisihlalo se-Archbishop yaseCologne kunye necawa ende kakhulu yasentwasahlobo kuyo yonke iYurophu..
Okubangel 'umdla kukuba, lo mqondiso ubalaseleyo wasetyenziselwa ukuba ube yindawo ezinzileyo kunye nengca yengca ngexesha loHlaziyo lwaseFrance. namhlanje, ngekhe ubone naziphi na izinto ezingcwele zeli nqanaba kwimbali yecawa enkulu. Ingaphakathi lihle nje ngaphandle ngaphandle ngeglasi enefestile kunye nobuncwane. UKolner Dom uphefumla ngokukodwa ebusuku kunye nezibane zelanga.
Ipinki, ilitha elululhlaza, kunye ne-marble facade emhlophe, imigangatho kaMoses ngaphakathi, i-Basilica di Santa Maria eFlorence yicawa enkulu yokuvuselela ngokutsha. Ngaphezu, Iifresco zikaGiorgio Vasari zeLate Judgment esilingini aziphoswa ngabathandi bobugcisa.
Icawe enkulu yaseFlorence ingaphezulu kwendawo ephawulekayo. Nokuba awunamdla kubugcisa, le cahedral izokuthakazelisa kwaye ikugcine uthande umsebenzi wobugcisa omangalisayo kangangeeyure. Ukuba ufuna umoya womoya omtsha, emva koko unyukele eBrunelleschi Cupola ngeembono zomlingo waseFlorence.
5. Uninzi lweeKedhedrali ezinomdla eYurophu: UCharles Cathedral, Vienna
Uphawu lwaseVienna, st. ICharles Cathedral iyamangalisa kwibala elimhlophe kunye nokukhanya okuluhlaza okuluhlaza. Eyilwe ngesimbo seBaroque, st. ICharles cathedral ibamba iindwendwe ukusukela 19th ngekhulu. Icawa enkulu yayenzelwe ukuhlonipha usanta uCharles Borromeo, feeder, kunye nomphathiswa wokubandezeleka kwizibetho zaseYurophu kwi 16th ngekhulu.
kunjalo, eyona nto inomdla kakhulu eSt. UCharles Basilica nguye 1250 Iifresco zesikwere kwi-copula. Ngokungafaniyo nezinye izindlu zecawa yaseYurophu, Apha ungathatha ilifti ebanzi yokuncoma iifresco kufutshane. ke, ukushwankathela, st. ICharles Cathedral eVienna ayizukuphoswa yeyakho ikhefu lekhefu kwisixeko eYurophu.
6. Icawe yaseLe Mans, Fransi
Kunikezelwa kwi-Saint Julian, ubishophu wokuqala waseLe Mans, Icawe yaseLe Mans, Yindibaniselwano entle yoyilo lwesimbo seFrench Gothic kunye neRomanesque nave. Enye yezinto ezinomdla eziza kuthabatha ingqalelo yakho zii-buttresses ezixhasa ingaphandle kuyilo oluhle. Yiyo loo nto i-facade yeLe Mans Cathedral yenye yezona zintle eYurophu.
Ngaphezu, iglasi enamabala kunye neengelosi ezipeyintwe eluphahleni lwecawa yecawe zongeza eLe Mans’ Uyilo olumangalisayo kwaye ushiye ubuninzi bobuncwane bokufumana ngaphakathi kule cathedral ineminyaka engama-500 ubudala.
7. Uninzi lweeKedhedrali ezinomdla eYurophu: st. UPawulos Cathedral, London
Ilawula isibhakabhaka saseLondon, kodwa ngaphandle, I-Cathedral yaseSaint Paul ayikho enye yezona ndawo zibalaseleyo. Ubuhle beSt. Cathedral kaPaul iya kuzityhila ukuba uthatha ixesha lokungena. ke, uya kothuka kumdlalo wokuhombisa omhlophe nomnyama. Ngaphezu, izindlu zecawa enkulu kune 300 izikhumbuzo zezona zintle zaseBritane, ezifana noWren ngokwakhe owakha i-cathedral ebalaseleyo.
kunjalo, yenye yezona zinto zinomdla eSt. Paul's Cathedral ligalari yokusebezela. Ewe, ukuba usebeza kwelinye icala legalari, Iindonga ziya kuyisa kwelinye icala.
8. ICahedral yaseBerlin
Ngaphandle kokonakaliswa kakhulu kwi-WWII, ICahedral yaseBerlin yicawa emangalisayo enomthombo kunye nengca eluhlaza ngaphambili. ICahedral yaseBerlin yakhiwa njengenxalenye yebhotwe lesixeko saseBerlin, kodwa umyili wezakhiwo uJulius Carl Raschdorff wayiguqula ukuze ibonakalise ubuqaqawuli nobungangamsha beSt. Paul’s Cathedral eLondon. Kuphela kwi 1993, ukubuyiselwa kwagqitywa, emva kokuwa kodonga olukhulu lwaseBerlin.
Izinto ezinomdla kakhulu kwiCathedral yaseBerlin ziifresco, izivatho zegolide, nemifanekiso eqingqiweyo. Ukwengeza, Icandelo le-Saucer elinomculo othandwayo nonyibilikisa intliziyo lelona lungu lokugqibela nelona likhulu kwezothando eJamani kufanelekile ukuba uzinike ixesha lokuhlala kunye nokudweliswa nje.. Ngaloo ndlela, yenyuka uye eqongeni lokujonga iimbono zedolophu yaseBerlin ukuze ugqibezele ukhenketho lwakho kwenye ye 12 iicawa ezinkulu ezinomdla eYurophu.
9. Uninzi lweeKedhedrali ezinomdla eYurophu: Ingcwele Icawa yaseBasil, eMoscow
Enye ye ezona ndawo zinomdla ukutyelela eRashiya yi-Saint Basil's Cathedral eMoscow. Awunakuphuthelwa yile cathedral imangalisayo kwaye uyakuyibona nakweliphi na indawo eRed Square nangaphaya. Njengoko usondela, icawe esembindini enamanye amabandla alithoba ayijikelezileyo.
Olona phawu lubangela umdla kukuba ezi tempile zinxibelelene neendinyana ezikhethekileyo. UIvan the Terrible wayengungqondongqondo ngasemva kwicawa iSaint Basil, kwaye izindlu ezinemibala emininzi ziyimfihlakalo kude kube namhlanje. Ngelixa olu hlobo loyilo luvele ngenkulungwane ye-17, kodwa ukhetho lwemibala alwaziwa.
Iigargoyles zavuka kunye neefestile zeglasi 2 yeempawu eziza kukutsala njengoko izigidi zabanye abatyeleli kwi-Notre Dame cathedral eParis. Intle ngaphandle, kwaye intle ngaphakathi, uvimba wendlu yecawa enkulu uya kukusa phezulu kwesona sixeko sithandwayo emhlabeni, for indawo engezansi.
UMama wethu umi eIle de la Cite kwaye uzinikele kwiNtombikazi eNoyolo. Ukwengeza, icawa yecawa yayiyindawo yeziganeko eziphambili ezifana nokubekwa etroneni kukaNapoleon Bonaparte, kunye nokubethwa kukaJoan waseArc. Ngaloo ndlela, Amehlo akho aya kubabaza ubuhle bokwakhiwa kwetempile, neendlebe zakho zibabaza iintsikelelo zobuqaqawuli.
11. Uninzi lweeKedhedrali ezinomdla eYurophu: I-Saint Mark's Basilica, Venice
Ngenye yezona ndawo zintle kakhulu eYurophu, kodwa zizinto eziyimfihlo ezihlala kwi-Basilica yaseSt, iyenza ibe yicawa ebabazekayo eYurophu. Ngokweentsomi, I-Basilica yaseSt, omnye wabapostile abane, emva kokuba abarhwebi beba bevela eYiputa. Eli bali libonisa umhla we-13 mosaic yenkulungwane, ngaphezulu komnyango wasekhohlo xa ungena kwi-basilica.
Ngaphezu, I-Saint Mark's Basilica igcina ubuncwane obuxabiseke ngakumbi kunelitye lesithsaba losapho lwasebukhosini- iPala dOro. IPala lutshintsho lwaseByzantiya, igcwele ngaphezulu kwe 2000 amatye anqabileyo. Ukushwankathela, ukuba ucwangcisa ukutyelela indawo enye eVenice, I-Saint Mark's Basilica yeyona, ukuba nomdla, ubuhle kunye nembali-bathanda abahambi.
12. st. IVitus Cathedral, Prague
Ngaphesheya kwemilambo, iibhulorho, kwiNqaba yeNqabileyo yasePrague, you will be enchanted by Saint Vitus cathedral. It took close to 6 Iinkulungwane ukugqibezela i-gothic cathedral, kweyona ndawo ibalulekileyo neyaziwayo ePrague. Ubungakanani bexesha elithathiweyo ukwakha iSaint Vitus Cathedral ibonakalisiwe kulungelelwaniso loyilo lwezitayile.
Icawa yaseSaint Vitus ine-Renaissance, Gothic, kunye nezinto zeBaroque: njengomphetho wenqaba esemazantsi kunye nelungu elikhulu kumantla. Iifestile zeglasi ezinamabala ziyinto ephawuleka kuyo nayiphi na icawa enkulu kunye naseSt. Iifestile zikaVitus aziweli kubuhle obusuka kwezinye izindlu zecathedral ezinomdla eYurophu.
WNdiza kukuvuyela ukukunceda ucwangcise uhambo olungalibalekiyo kwezi 12 Cathedral umdla eYurophu ngololiwe, Ngena kwihlabathi Gcina A Isitimela.
Ngaba ufuna ukufaka iposti yethu yebhlog " 12 Uninzi lweeKedhedrali ezinomdla eYurophu ”kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fxh%2Fmost-fascinating-cathedrals-europe%2F - (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)